Tranonkala maro voarara tany Myanmar. Norarana ihany koa ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2018 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, عربي, বাংলা, Español, 简体中文, 繁體中文, bahasa Indonesia, English
Nanomboka nandrarà ny tranonkala maro, anisan'izany ny bilaogy miaraka amin'ny sehatr'izy ireo manokana ny Bagan ISP, iray amin'ireo mpanome tolotra aterineto roa ao amin'ny MPT (Paositra sy Fifandraisan-davitra ao Myanmar).
Pikantsarin'ny tranonkala Global Voices voarara tao Myanmar
Nahitana ny twitter, wordpress (sy ny sehatra bilaogy mifandraika aminy), ary ny Global Voices ny sasany tamin'ireo lisitry ny fandraràna fanampiny vaovao.
Nanoratra i Htoo Tayzar, iray tamin'ireo bilaogera izay manana ny sehany manokana hoe:
Raha ny marina, tsy vao voalohany izao no (norarana ny tranonkalako). Hatramin'ny taona 2007, nandrara ny blogspot.com iray manontolo ny Bagan (MTP). Tamin'io fotoana io, mbola nanoratra tao amin'ny bilaogy aho, ary rehefa nanavao ilay pejy aho no nahitako voalohany fa voarara izany. Tamin'io fotoana io dia mbola nisokatra hatrany ny MPT. Koa nifindra tany amin'ny cybercafe izay nampiasa ny fifandraisana MPT aho noho izany. Tsy naharitra ela izany. Roa herinandro taoriana teo, noraràn'ny MPT ihany koa ny (Blogspot). Taorian'izany dia nividy ny sehatro manokana aho.
Na izany aza, nanoratra i Htoo Tayzar fa tany am-piandohan'ny taona 2009 no nahitany fandraràna sehatra-ny noho izany dia nandefa fangatahana tany amin'ny ISP izy mba hanokafana izany. 2 andro taoriana, nosokafana indray ny tranonkalany, anisan'izany ny tranonkala miisa 5 izay nampidiriny tao amin'ny mailaka. Fanindroany androany no nandrarana izany. Tao amin'ny fifandraisana Bagan ihany izany no voarara izany fa misokatra amin'ny MPT.
Nandrara ny Blogspot sy ny sehatra mifandraika amin'izy ireo tamin'ny taona 2007 ny mpanome tolotra aterineto, ka nividy ny sehatr'izy ireo manokana mba hahafahan'ireo mpamaky mijery azy ireo mora ny sasany tamin'ireo bilaogera izay nibilaogy tamin'ny Blogspot .
Nanoratra i Nyi Lynn Seck , iray tamin'ireo bilaogera izay nividy ny seha(tra)-ny manokana hoe:
Miala tsiny aho. Nosakanan'ny Bagan ISP ny bilaogiko. Nividy ny sehatro manokana aho tamin'ny volako manokana, ary naveriko izany mba hahafahan'ireo mpamaky mora mijery ny tranokalako rehefa nanomboka nandràra ny Blogspot sy WordPress izy ireo (ISP). Ankehitriny, tsy afaka manao na inona na inona intsony aho. Na izany aza, efa nanoratra tao amin'ny bilaogiko hatramin'ny taona 2005 aho, ary mbola hanohy hanoratra eto ihany. Na inona na inona fandraràna atao amin'ny bilaogy, satria misy ny rafitra Mail to Blogger , izay ahafahako mandefa mailaka ny hafatra avy amin'ny adiresy rehetra, dia mbola hanohy hanoratra ao amin'ny bilaogiko aho. Omeko lanja ny fiainako amin'ny maha-bilaogera ahy, noho ny lahatsoratra tsirairay nosoratako, dia nanao ezaka maro aho hanoratako ny zavatra niainako.
Misy mpanome tolotra aterineto roa amin'izao fotoana izao – Bagan ISP (Myanmar Teleport) sy MPT ISP. Ny sasany tamin'ireo tranonkala izay voarara tao amin'ny Bagan ISP dia tsy mbola voarara tao amin'ny ISP MPT ary tahaka izany koa ny tao amin'ny ankilany .